Ukuqashelwa Komthetho Ngokuqashelwa Komthetho Nokugcinwa Kwemfihlo e-Asia | Izixazululo ze-OMG
Ukuqashelwa Komthetho Ukuqashelwa Komthetho Nokugcinwa Kwemfihlo e-Asia
Inkinga enkulu yeminyango yamaphoyisa esebenzisa amakhamera okuqoshwa kwamaphoyisa, ukuthi esimweni sokuxineka, i-Agent ikhumbula ukuqopha ikhamera. Kungenzeka ukuthi, ngaphansi kwengcindezi, uMenzeli akakhumbuli nokuthi uphethe ikhamera ngakho-ke ulahlekelwa bonke ubufakazi obucacile obubandakanya ukuba nevidiyo nokuqoshwa komsindo kwesenzo samaphoyisa.
Enye yezinkinga ezinkulu zokuphepha ukuthi ngubani olawula thina nokuthi kanjani. "Lobu ubuchwepheshe obunamandla wangempela wokusebenza njengamandla okulawula namandla okusinda emandleni wamaphoyisa,"
Cishe akukho ukungenelela kwamaphoyisa ngaphandle kokuhlaselwa umzimba: udlame olubhekiswe emaphoyiseni luyanda. Amakhamera okuthiwa abizwa ngokuthi yi-body camera kufanele asize ukumumbatha. Amakhamera, asetshenziswa kuyunifomu, aqopha ukuhlaselwa futhi asebenza njengezindlela zokucindezela, kanye nokuqinisekisa ubufakazi.
Amaphoyisa angawasebenzisa lapho kunosongo lodlame futhi asendaweni yomphakathi. Ukuphela kokufanele bakwenze ukwazisa umuntu othintekayo ukuthi konke kuzoqoshwa kuvidiyo. Amazwe amaningi ase-Asia asevele esebenzisa amakhamera omzimba. Noma kuphikiswa nengcindezi yabavikeli bemininingwane, ababona ilungelo eliyisisekelo lokuzinquma kolwazi. Ngokusho kwamaphoyisa, umphumela waba mkhulu: abahlaseli abaningi balinganiswa, futhi amacala alandelayo ezinkantolo nawo alula ngokuqoshwa. Ngasikhathi sinye, kungenzeka ukubheka ukuthi amaphoyisa ngokwawo enze kahle yini.
Into enhle ngamakhamera wamaphoyisa ukuthi athathe izithombe zemihlangano yamaphoyisa namalungu omphakathi, okubandakanya abasolwa, ofakazi kanye nabadlulayo. Ukuqoshwa kusiza ukugcina wonke amaqembu athembekile futhi kuvumela ukuba bathembane, ngoba bazi ukuthi noma yini umuntu othile ayishoyo ngokusebenzisana ingaqinisekiswa ngokuhamba kwesikhathi.
Kungase kube nenani lokuphepha komphakathi lobunye ubuchwepheshe: ukuqashelwa kobuso. Ungahlaziya izici zomuntu ukuze uziqhathanise namaphrofayli agcinwe ku-database, njengamalayisense oMnyango Wezimoto. "Izigxivizo zeminwe zobuso" zedijithali ezenziwe ngezinhlelo zokubona izithombe zingasetshenziswa ukusiza ukuthola abantu abalahlekile ngesifo i-Alzheimer's, isibonelo, noma abasolwa ngobugebengu, noma omunye umuntu
Manje, ezinye izinhlangano zamaphoyisa zibheke ukuhlanganisa lobu buchwepheshe obunye, zibeka ukuqoshwa kwamakhamera omzimba ngokuhlaziywa kobuso bokubona.
Lokho bekuzokwenza iphoyisa ngalinye libe nento efana nesihloli.
Kwakuzokwenza umzimba ngamunye ube yindawo yokuqoqa, yokugcina kanye nokuhlaziya imininingwane yomuntu siqu ngaphandle kwemvume yezihloko ezirekhodiwe. Futhi wayezokwenza noma ngabe lezo zifundo azisolwa ngokwenza kabi.
Ukuqashelwa kobuso, kuhlanganiswe nezithombe zekhamera yomzimba, kungasetshenziswa kabi. Ungalandela ukuthi umuntu ngamunye ukuphi nganoma yisiphi isikhathi futhi ugcine leyo datha kumarekhodi anaphakade wokusebenzisa kamuva. Ingasetshenziswa ngisho nasekubhekeni okuqhubekayo komphakathi wonke. Kungumqondo omubi kakhulu. Kungabukela phansi yonke inhloso yamakhamera omzimba, obekuwukubuyisa ukuzethemba emaphoyiseni.
Ubuchwepheshe uqobo buwubuchwepheshe nje: amathuluzi ahlukahlukene athuthukisa amandla omuntu. Izihluthulelo zezinzuzo zalo nezingozi zayo yimithetho ekhombisa ukuthi amandla angasetshenziswa kanjani. Amakhamera omzimba, ngokwesibonelo, angashabalala kalula, kunokuba ande, athembele emaphoyiseni uma ngabe kuphela izikhulu ezazingena ezithombeni futhi uma zikwazi ukulawula ukusetshenziswa kwazo. Ngenxa yalokho, uMnyango Wamaphoyisa nezinye izinhlaka zamukela imithetho edinga ukudalulwa komphakathi kwezithombe ezithathwe kumakhamera omzimba emasontweni ambalwa omhlangano. ISishayamthetho senze okufanayo ngonyaka ophelile ngoku-oda ukuthi noma ngabe iyiphi inhlangano esebenza ngomthetho esebenzisa amakhamera omzimba yenza izithombe zitholakale emphakathini ngokulinganayo. Abenzi bezomthetho manje babheka umthethosivivinywa ozovimbela ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokubona ubuso kanye nezithombe zekhamera yomzimba.
Amanye amaqembu amaphoyisa aphikisana nalomthethosivivinywa ngoba umbuso akufanele uwavimbele ekusebenziseni amathuluzi enza lula ukulwa nobugebengu kanye nokuhlonzwa kwabephula umthetho.
Futhi kunokulinganisela okufanele umphakathi kufinyelele kukho phakathi kobumfihlo: ukukhululeka ekugxambeni kombuso empilweni yangasese nokuqiniseka ukuthi ukubona iphoyisa akusho ngokuzenzakalelayo ukufaka imininingwane yakho kunoma iyiphi i-database yedijithali. Imvelo yokwenqabela ukumane itheknoloji entsha noma eyethusayo iyaqondakala, kodwa sonke singazuza ngendlela ecabangayo.
Futhi, ezinye izinhlobo zokuqapha zenziwa ngempilo yesimanjemanje futhi zizokwanda ngandlela zonke. Okwamanje ungakhokha amadola ambalwa amakhamera wokuphepha axhunywe kwi-Intanethi angakutshela, noma ngabe ukuphi, ubani osemnyango wakho. Lolo hlobo lobuchwepheshe ngeke lushabalale.
Ungabelana ngalezo zithombe eziqoqwe nomnyango wamaphoyisa wangakini, ongazisebenzisela izinjongo zakho zokuphepha komphakathi noma zokuhlola ukubonwa kwakho. Amasela amaningi epakethi abanjwe esebenzisa izithombe ezabiwe namaphoyisa.
Kepha ingabe abasebenzisi balezo zinhlelo kufanele babelane ngezithombe namaphoyisa? Leyo ngenye indaba ehluke ngokuphelele. Kufanele kuthuthukiswe imithetho ukuqinisekisa ukuthi ubuchwepheshe, kanye nohulumeni, basebenzela umphakathi hhayi okuphambene nalokho.
Umthethosivivinywa ovimbela ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokubona ubuso kanye namakhamera wamaphoyisa kugcina umphakathi ubhekiwe. Ukwelulwa kwemvelo komthethosivivinywa wangonyaka odlule ukuqinisekisa ukuthi umphakathi ekugcineni ungafinyelela ukuqoshwa kwamakhamera omzimba. Iqinisekisa ukuthi amakhamera omzimba aqhubeka nokusebenza njengoba kuhlosiwe, ukukhulisa ukuzethemba ekusebenzeni komthetho, kunokudlulisa amandla obuchwepheshe bomphakathi emaphoyiseni.
Enye yezinkinga ezinkulu zokuphepha ukuthi ngubani olawula thina nokuthi kanjani. "Lobu ubuchwepheshe obunamandla wangempela wokusebenza njengamandla okulawula kanye namandla okulwa namandla wamaphoyisa,"
Kungase kube nenani lokuphepha komphakathi lobunye ubuchwepheshe: ukuqashelwa kobuso. Ungahlaziya izici zomuntu ukuze uziqhathanise namaphrofayli agcinwe ku-database, njengamalayisense oMnyango Wezimoto. "Izigxivizo zeminwe zobuso" zedijithali ezidalwe yizinhlelo zokubona izithombe zingasetshenziswa ukusiza ukuthola abantu abalahlekile ngesifo i-Alzheimer's, ngokwesibonelo, noma abasolwa ngobugebengu, nanoma ngubani.
Ukuqashelwa kobuso, kuhlanganiswe nezithombe zekhamera yomzimba, kungasetshenziswa kabi. Ungalandela ukuthi umuntu ngamunye ukuphi nganoma yisiphi isikhathi futhi ugcine leyo datha kumarekhodi anaphakade wokusebenzisa kamuva. Ingasetshenziswa ngisho nasekubhekeni okuqhubekayo komphakathi wonke.
Kungumqondo omubi kakhulu. Kungabukela phansi yonke inhloso yamakhamera omzimba, obekuwukubuyisa ukuzethemba emaphoyiseni.
Ubuchwepheshe uqobo buwubuchwepheshe nje: amathuluzi ahlukahlukene athuthukisa amandla omuntu. Izihluthulelo zezinzuzo zalo nezingozi zayo yimithetho ekhombisa ukuthi amandla angasetshenziswa kanjani. Amakhamera omzimba, ngokwesibonelo, angashabalala kalula, kunokuba ande, athembele emaphoyiseni uma ngabe kuphela izikhulu ezazingena ezithombeni futhi uma zikwazi ukulawula ukusetshenziswa kwazo. Ngenxa yalokho, uMnyango Wamaphoyisa nezinye izinhlaka zamukela imithetho edinga ukudalulwa komphakathi kwezithombe ezithathwe kumakhamera omzimba emasontweni ambalwa omhlangano. ISishayamthetho senze okufanayo ngonyaka ophelile ngoku-oda ukuthi noma ngabe iyiphi inhlangano esebenza ngomthetho esebenzisa amakhamera omzimba yenza izithombe zitholakale emphakathini ngokulinganayo.
Abenzi bomthetho manje babheka umthethosivivinywa ozovimbela ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokubona ubuso kanye nezithombe zekhamera yomzimba.
Ukuqashelwa Komthetho Ukuqashelwa Komthetho Nokugcinwa Kwemfihlo e-Asia igcine ukuguqulwa: I-December 12th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4475 Ukubuka kwe-3 Namuhla